Jurgen Klopp oo xaqiijiyey inuusan soo xaadiri doonin kulanka ku celiska ah ee FA Cup-ka oo ay la ciyaari doonaan Shrewsbury – Gool FM
(Liverpool) 27 Jan 2020. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay inuusan soo xaadiri doonin kulanka lugta labaad ee wareegga afaraad ee koobka FA Cup-ka oo ay la ciyaari doonaan naadiga Shrewsbury Town, isla markaana ay ciyaarsiin doonaan xiddigaha da’yarta naadiga.
Kooxda kubadda cagta Shrewsbury Town ayaa barbaro 2-2 ah la gashay Liverpool kulan ka tirsanaa wareegga afaraad ee tartanka FA Cup-ka kaddib markii ay Liverpool oo la hor martay 2 gool soo laabshana lagu sameeyay.
Kulanka ku celiska ah ayaa ka dhici doona Anfield waxaana uu Klopp haatanba xaqiijiyay in ayan isaga iyo xiddigaha kooxda koowaad ka qayb noqon doonin.
Klopp oo arrintaas ka hadlaya ciyaarta kaddib ayaa yiri: “Xiddigaha kooxda koowaad ma ciyaari doonaan kulanka ku celiska ah ee Shrewsbury Town, waxa aan ciyaarsiin doonaa xiddigo da’yar ah”.
“Xitaas Anigu ma joogi doono kulankaasi waxaa hoggaamin doona tababare Neil Critchley Tababaraha da’yarka Liverpool”.
“Ciyaartoydeenna waa weyn ah sida Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Gini Wijnaldum, Trent Alexander-Arnold, Mo Salah, Sadio Mane, dhammaantood cagta soo ma dhigi doonaan kulanka soo socda ee ku celiska ah”
Yeelkeede Klopp wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda nasashada ee ciyaartoydiisa, maadaama ay sanadkan kooxdiisa u diyaar san tahay soo xaraynta tartammada maxalliga ah iyo Champions League-ga fasal ciyaareedkan 2019-20, waxaana sidoo kale xusid mudan inay u safreen Qatar si ay ugu tartamaan Koobka kooxaha Adduunka kaasoo ay gacanta ku soo dhigeen.
“Waa inaan ixtiraamno ciyaartooydeenna waa weyn waayo waxay u baahan yihiin nasasho.” ayuu markale yiri Klopp.
“Markaa tartan kale ayaa noo sheegaya inaan sidaa muhiim u ahayn, sidaa darteed waa inaan go’aannadaas horay u qaadanno, maxaa yeelay wiilashan waxay leeyihiin qoysas.”
“Tani waa isbuuca aan idhi xilligan xaadirka ah way cadahay inay dhici lahayd bilo ka hor jiilaalka, ka hor intaanan ogaanin in ku celinta FA Cup ay dhex mari karto, inay noqon lahayd nasasho jiilaal, waan xushmaynaynaa taas, taasna waan samayn doonnaa.”
“Ciyaartoyda ayaa maqnaan doona hal todobaad, iyagu ma’ahan fasax, way tababaran doonaan, laakiin naftooda ayay u tababaran doonaan, waxay leeyihiin barnaamijyo socod, waxay leeyihiin barnaamijyo Jimicsi, taasi waa waxa ay qabtaan.”